Maxkamada Oslo oo soo saartay go’aan loogu wareejin karo Mullah Krekar dalka Talyaaniga… – Hagaag.com
Maxkamada Oslo oo soo saartay go’aan loogu wareejin karo Mullah Krekar dalka Talyaaniga…
Maxakamdda magaalada Oslo ayaa soo saartay go’aan loogu wareejin karo wadaadka lagu magacaabo Najumuddin Faraj Ahmad (63-jir), balse loo yaqaan mullah Krekar kaas oo ay dowladda Talyaanigu ku haysato arrimo argagixiso islamarkaana ay soo dalbatay.
Go’aankan maxkamadda ayaa islamarkiiba waxaa gaashaanka u daruuray qareenka Krekar oo lagu magacaabo Brynjar Meling, waxaana uu sheegay in ay adeegsanayaan fursad walba oo dhanka caddaaladda ah islamarkaana Isniinta ay racfaan ka qaadan doonaan go’aankan.
Dowladda Talyaaniga ayaa ku eedeysay Mullah Krekar in uu hoggaamiye u ahaa urur argagixiso oo lagu magacaabo Rawti Shax kaas oo unugyo ku lahaa dalkeeda, hadafkooduna ahaa in ay weeraro ka geystaan waddamada reer galbeedka.
15-kii bisha July ee sannadkan ayaa waxaa maxkamad ku taal magaalada Bolzano ee dalkaasi talyaaniga ay ku xukuntay Mullah Krekar isagoo maqan 12-sano oo xabsi ah, tan iyo xilligaasina waxaa ay dowladda Norway wadday qorshihii ay ku dhiibi laheyd.
Bishii July ilaa iyo iminka waxaa ay dowladda Norway xabsiga ku haysay wadaadkan oo sagaashameeyadii dalkeeda qaxooti ahaan kusoo galay islamarkaana ay sharci siisay si ay ugu wareejiso Talyaaniga marka ay maxkamaddu amarto.
Mullah Krekar ayaa marxalado kala duwan ku maray dalka Norway, waxaana uu arrinkiisu soo ifbaxay kaddib sannadkii 2001-dii xilligaas oo ahaa markii weerarka lagu qaaday daarihii mataanaha ahaa ee magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Waxaa uu dhowr jeer uu xabsi ku galay dalka Norway kuwaas oo qaarkood qaatay sannado.
Sidoo kale wadaadkan ayaa waxaa isha ku hayay Mareykanka oo mar soo dalbaday in loo soo gacan-geliyo.